Imayini wokutakula Equipments
Imayini ukwesekwa Equipments
Imayini wasebenzisa amandla Equipments
amathuluzi Rock imishini
Undergroud nobudlova Equipments
Underground ephakamisa Equipments
imishini ezokuthutha Underground
Robit olandela ukukhula global
isikhathi Iposi: 06-06-2018
Robit kushiwo ukuthi lokhu kakhulu ukuqinisa endaweni yayo ibhizinisi dth, futhi ne zigqila ezimbili, ezuziwe yokuthengisa yenkampani net kuyoba kukhulu kune € 75 million (US $ 83 million). Ngokusho Robit, le zigqila ziyingxenye ebalulekile yamasu waso wokukhula embulungeni yonke, futhi kuba looki ...Funda kabanzi »
Atlas Copcoconsolidates Chinese imisebenzi yezimayini
Inkampani uthe lo mnyakazo kuzokhulisa kahle futhi uqinise inkampani lekusasa. Atlas Copco kuzovala luhlobo yayo Shenyang, ekhiqiza ikakhulukazi ngesandla idwala sokuzivivinya ngoba ezimayini nasembonini yokwakha, washintsha imisebenzi esitshalweni e Zhangjiakou. Ngo Shenyang, mayelana 225 pe ...Funda kabanzi »
Caterpillar ukunqamula ithrekhi sokuzivivinya, ukunqanda abantu bangathathi ikamelo kanye nensika yokukhiqiza
Inkampani wawuthi ukuhlola izindlela zamasu kuzovumela ke ukugxila kulabo imikhiqizo kunabo ukukhula ezingaba khona. Caterpillar wanezela ukuthi inkampani futhi wabenza yayo ukuhlala ezibophezele amakhasimende ekhona futhi uyokusekela ikamelo kanye nensika ithrekhi sokuprakthiza labo mabutho okwamanje ...Funda kabanzi »
Ikheli: Igumbi 716, B Isakhiwo, NO.5 Lanyuan Road, Nankai District, Tianjin, China